China High Valerophenone CAS 1009-14-9 si China ụlọ ọrụ nke Valerophenone ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Guanlang
Akwa mma Valerophenone CAS 1009-14-9 si na ụlọ ọrụ China nke Valerophenone
enweghị mmiri mmiri
Insoluble na mmiri.
Ngwaahịa a na-ere ọkụ dị Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone), nke bụ ketone aromatic. Usoro ngwongwo nke Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) bụ C11H14O.Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) bụ mmiri na-enweghị ntụpọ nke nwere akara ngosi nke 102 Celsius C. Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) bụ kemịkal kemịkal organic. A na-eji Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) mee ihe dị ka ngwá ọrụ na nyocha nke usoro usoro foto dị iche iche.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) bụkwa onye na-egbochi enzyme carbonyl reductase. Ọ kwesịrị ịchekwa na ebe dị jụụ, akọrọ, nke nwere ikuku nke ọma site na ihe ndị na-ekwekọghị ekwekọ.dị ọcha nke Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) nwere ike iru karịa 99%. Mmepụta anyị kwa afọ nwere ike iru 500 ruo 800 tọn. Ajuju ndi ozo banyere Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) kporo anyi ma obu zipu ozi. Anyị nwekwara ike ịkwado ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya na-echere ajụjụ gị.
E nwere ụdị mbukota abụọ maka Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara, obere mbukota bụ 25kg drum na nnukwu mbukota bụ 200kg drum.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) bụ ngwaahịa na-adịghị ize ndụ, dị mfe ibufe.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) ugbu a bụ ihe ewu ewu n'ọtụtụ mba, ụlọ ọrụ anyị bụ ndị otu ọkachamara, mgbe ị na-akwụ ụgwọ naanị mkpa ịnata ngwongwo, Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) na-enyefe oge ọsọ ọsọ, naanị n'ime awa 24 anyị nwere ike izipu, gịnị kpatara anyị ji ebufe Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) ngwa ngwa n'ihi na anyị nwere ngwaahịa zuru oke.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara bụ nke ebuputara na Europe na ụfọdụ mba dị na South America, dịka United States, Mexico, Guatemala na Paraguay. Ihe karịrị 90% nke ndị ahịa ga-ahọrọ Guanlang.
A na-ebupụ Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na Russia nwere akara pụrụ iche nke Russia, nke dị nchebe ma dị mfe maka njem. Ya mere, ọtụtụ ndị ahịa Russia ga-ebute Guanlang ụzọ iji zụta Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara phenylpentanone.
Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone) nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nwere ezigbo aha n’etiti ndị ahịa.
Companylọ ọrụ anyị na-arụpụtakwa ngwaahịa ketone ndị ọzọ aromatic yiri Valerophenone (1-Phenyl-1-pentanone):
Nke gara aga: Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 n'efu na-enyefe ngwa ngwa
Osote: Procaine hydrochloride CAS 51-05-8